समाचार - नयाँ क्षितिजहरू पत्ता लगाउनुहोस् 5G ले वाहन र V2X संचारहरूको इन्टरनेटमा ल्याउँदछ
ITProPortal यसको दर्शकहरु द्वारा समर्थित छ। जब तपाईं हाम्रो वेबसाइटमा लिंक मार्फत खरीद गर्नुहुन्छ, हामी एक सम्बद्ध आयोग प्राप्त गर्न सक्दछौं। अझै सिक
अब जब हामीसँग इन्टरनेट को सवारी टेक्नोलोजी (V2X) छ, हामी स्मार्ट कारको नयाँ पुस्ता विकास गर्न 5G टेक्नोलोजी र मोटर वाहन सफ्टवेयर समाधानको एकीकरणका लागि कृतज्ञ छौं।
सवारी साधन एक आपसमा रोचक समाधान छ कि दुनिया भर मा सवारी यातायात दुर्घटनाहरु लाई कम गर्दछ। दुर्भाग्यवस, २०१ in मा, सडक यातायात दुर्घटनाहरूले १. 1. मिलियनको ज्यान लिए। अब जब हामीसँग इन्टर्नेट अफ व्हीकल (V2X) टेक्नोलोजी छ, हामी ड्राइभरको अनुभवलाई सुधार गर्नका लागि नयाँ कारको स्मार्ट कारको विकासमा G जी टेक्नोलोजी र अटोमोटिभ सफ्टवेयर समाधानको एकीकरणका लागि कृतज्ञ छौं र सफल हुनका लागि अटोमेकरहरू।
सवारी साधनहरू अब अधिक र अधिक अन्तरक्रियाशीलता अनुभव गरिरहेका छन्, नेभिगेशन अनुप्रयोगहरू, अन-बोर्ड सेन्सरहरू, ट्राफिक लाइटहरू, पार्कि facilities सुविधा, र अन्य मोटर वाहन प्रणालीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै छन्। कारले केही क्याप्चर उपकरणहरू (जस्तै ड्यासबोर्ड क्यामेरा र रडार सेन्सरहरू) मार्फत वरपरको वातावरणसँग समन्वय गर्दछ। नेटवर्कका गाडीहरूले डाटाको ठूलो मात्रा स collect्कलन गर्दछ, जस्तै माइलेज, जियोलोकेशन कम्पोनेन्टहरूमा क्षति, टायर प्रेशर, ईन्धन गेज स्थिति, सवारीको लक स्थिति, सडक सर्तहरू, र पार्कि conditions सर्तहरू।
मोटर वाहन उद्योग समाधानको IoV आर्किटेक्चर GPS, DSRC (समर्पित छोटो दूरी को संचार), Wi-Fi, IVI (in-वाहन infotainment), ठूलो डाटा, मेशिन शिक्षा, इन्टरनेट अफ थिंग्स, कृत्रिम जस्ता मोटर वाहन सफ्टवेयर समाधानहरू द्वारा समर्थित छ। बुद्धिमत्ता, सास प्लेटफार्म, र ब्रॉडबैंड जडान।
V2X टेक्नोलोजीले वाहन (V2V), सवारी साधन र पूर्वाधार (V2I), वाहनहरू र अन्य ट्राफिक सहभागीहरू बीच समिकरणको रूपमा प्रकट गर्दछ। विस्तारको माध्यमबाट, यी नवीनताहरूले पनि पैदल यात्रीहरू र साइकल चालकहरू (V2P) समायोजित गर्न सक्छन्। छोटकरीमा, V2X आर्किटेक्चरले कारहरूलाई अन्य मेशिनहरूमा "कुरा गर्न" सक्षम गर्दछ।
नेभिगेसन प्रणालीमा सवारी साधन: नक्शा, जीपीएस र अन्य गाडी डिटेक्टरहरूबाट निकालेका डाटाले लोड गरिएको सवारीको आगमन समय, बीमा दाबी प्रक्रियाको क्रममा दुर्घटनाको स्थान, शहरी योजना र कार्बन उत्सर्जन घटाउने ऐतिहासिक डाटा आदि गणना गर्न सक्दछ। ।
यातायात पूर्वाधारको सवारी साधन: यसमा संकेतहरू, ट्राफिक सल्लाहहरू, टोल स units्कलन एकाइहरू, कार्यस्थलहरू, र शैक्षिक क्षेत्रहरू सामेल छन्।
सार्वजनिक यातायात प्रणालीको लागि सवारी साधन: यसले सार्वजनिक यातायात प्रणाली र ट्राफिक अवस्थासँग सम्बन्धित डाटा उत्पन्न गर्दछ, जबकि वैकल्पिक मार्गहरूको सिफारिश गर्दा यात्राको पुन: योजना बनाउँदा।
5G ब्रॉडबैंड सेलुलर जडानको पाँचौं जेनेरेसन हो। मौलिक रूपमा, यसको अपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी सीमा 4G भन्दा उच्च छ, त्यसैले जडान गति 4G भन्दा १०० गुणा राम्रो छ। यस क्षमता अपग्रेडको माध्यमबाट, 5G ले अधिक शक्तिशाली प्रकार्यहरू प्रदान गर्दछ।
यसले डाटा द्रुत प्रक्रिया गर्न सक्दछ, जडान भएका उपकरणहरूको द्रुत प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्न सामान्य स्थितिहरूमा is मिलिसेकेन्डहरू र १ चोटी गति अन्तर्गत १ मिलिसेकेन्ड प्रदान गर्दछ।
दुर्भाग्यवस, यसको २०१० को रिलीजको मध्य वर्षहरूमा, अपग्रेड विवाद र कठिनाइहरूमा फसेको थियो जुन सब भन्दा गम्भीर गम्भीर सम्बन्ध नै यसको हालको विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटसँगको सम्बन्ध थियो। यद्यपि, गाह्रो सुरूको बावजुद, G जी अब संयुक्त राज्यका 500०० शहरहरूमा सञ्चालनमा छ। यस नेटवर्कको विश्वव्यापी प्रवेश र ग्रहणको समय नजिकै छ किनकि २०२25 को पूर्वानुमानले संकेत गर्यो कि G जीले विश्वको इन्टरनेटको एक पाँचौ हिस्सा प्रमोट गर्नेछ।
V2X टेक्नोलोजीमा GG लाई प्रयोगको लागि प्रेरणा कारको सेल्युलर संरचना (C-V2X) मा बसाई सर्नेबाट आएको हो - यो जोडिएको र स्वायत्त सवारीका लागि नवीनतम र उच्चतम उद्योग अभ्यास हो। अडी, फोर्ड र टेस्ला जस्ता प्रख्यात अटो निर्माण दिग्गजहरूले आफ्ना गाडीहरू सी-वी २ एक्स टेक्नोलोजीले सुसज्जित गरेका छन्। सन्दर्भको लागि:
मर्सिडीज बेंजले उत्पादन चरणमा G जी स्वायत्त जडान गरिएको कारहरू स्थापना गर्न एरिसन र टेलिफ्निका ड्युचल्यान्डसँग साझेदारी गरे।
बीएमडब्ल्यूले सामसु and र हर्मनसँग सहकार्य गरेको छ बीएमडब्ल्यू आईएनक्स्ट launch जी-आधारित टेलिमेटिक्स नियन्त्रण एकाई (टीसीयू) बाट सुसज्जित छ।
अडीले २०१ 2017 मा घोषणा गर्‍यो कि यसको सवारी साधन ट्राफिक बत्तीसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्षम हुनेछ जब चालक रातो देखि हरियोमा परिवर्तन हुन्छ।
C-V2X असीमित क्षमता छ। यसका अवयवहरू 500०० भन्दा बढी शहरहरू, काउन्टीहरू र शैक्षिक जिल्लाहरूमा यातायात प्रणाली, ऊर्जा पूर्वाधार र भवन सुविधाका लागि स्वायत्त जडानहरू प्रदान गर्न प्रयोग गरिएको छ।
C-V2X ले यातायात सुरक्षा, दक्षता र सुधारिएको ड्राइभर / पैदल यात्री अनुभव ल्याउँछ (राम्रो उदाहरण ध्वनिक सवारी चेतावनी प्रणाली हो)। यसले लगानीकर्ताहरू र थिंक ट्या्कहरूलाई धेरै परिदृश्यहरूमा ठूला-ठूला विकासको नयाँ तरिकाहरू पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ। उदाहरणको लागि, सेन्सरहरू र ऐतिहासिक डेटा प्रयोग गरेर "डिजिटल टेलिपेथी" सक्रिय गर्न, समन्वयित ड्राइभि।, टकराव रोकथाम र सुरक्षा चेतावनी प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामीलाई V2X को धेरै अनुप्रयोगहरूको गहिराइ समझ छ कि 5G समर्थन गर्दछ।
यसमा फ्लीटमा हाइवेमा ट्रकहरूको साइबरनेटिक जडान समावेश छ। गाडीको नजिकको अन्त पign्क्तिबद्धताले सिnch्क्रोनाइज्ड गति, स्टीयरिंग र ब्रेकिंगलाई अनुमति दिन्छ, यसैले सडक दक्षता सुधार गर्दछ, ईन्धन बचत गर्दछ र उत्सर्जन घटाउँछ। अग्रणी ट्रकले अन्य ट्रकहरूको मार्ग, गति र दूरी निर्धारण गर्दछ। G जी-बाउन्ड ट्रक यातायातले सुरक्षित लामो दूरीको यात्रा महसुस गर्न सक्दछ। उदाहरण को लागी, जब तीन वा अधिक कारहरु ड्राइभ गरीरहेको छ र एक ड्राइभर घिसदैछ, ट्रकले स्वचालित रूपले प्लाटून नेताको अनुसरण गर्दछ, ड्राइभरको तन्द्रा को जोखिम कम गर्दछ। थप रूपमा, जब प्रमुख ट्रकले एक इभ्यासिभ कार्य गर्दछ, पछाडि अन्य ट्रकहरूले पनि उहि समयमा प्रतिक्रिया देखाउँछन्। स्क्यानिया र मर्सिडीजजस्ता मौलिक उपकरण निर्माताहरूले सडक मोडलहरू ल्याए, र संयुक्त राज्यका धेरै राज्यहरूले स्वायत्त ट्रक ट्रेलिंग अपनाए। Scania समूहका अनुसार, लामबद्ध ट्रकहरूले उत्सर्जन २०% सम्म घटाउन सक्छ।
यो एक जडान गरिएको कारको प्रगति हो जसरी कारले प्रमुख यातायात सर्तहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ। एक V2X वास्तुकला संग सुसज्जित कारले आफ्नो चालहरुलाई समन्वय गर्न अन्य ड्राइभरहरु संग सेन्सर जानकारी प्रसारण गर्न सक्छ। यो हुन सक्दछ जब एक कार बितेर जान्छ र अर्को कार स्वचालित रूपमा पनी चालमा समायोजन गर्न ढिला हुन्छ। तथ्यहरूले प्रमाणित गरेको छ कि ड्राइभरको सक्रिय समन्वयले लेन परिवर्तन, अचानक ब्रेकिंग र अनियोजित अपरेशनहरूको कारण हुने अवरोधहरूलाई प्रभावकारी रूपमा दमन गर्न सक्छ। वास्तविक विश्वमा, निर्देशित ड्राइभिंग 5G टेक्नोलोजी बिना अव्यावहारिक छ।
यस संयन्त्रले कुनै पनि आउँदै गरेको टक्करको सूचना प्रदान गरेर ड्राइभरलाई समर्थन गर्दछ। यो सामान्यत: स्वचालित स्टीयरिंग रिपोजिटि or वा जबरजस्ती ब्रेकि asको रूपमा प्रकट हुन्छ। एक टक्कर को लागि तैयार गर्न, वाहन स्थिति, गति, र अन्य सवारीसँग सम्बन्धित दिशा प्रसारित गर्दछ। यस वाहन जडान टेक्नोलोजीको माध्यमबाट, ड्राइभरहरूले साइकल चालक वा पैदल यात्रीहरूलाई हिर्काउनबाट जोगाउन केवल उनीहरूको स्मार्ट उपकरणहरू खोज्नु पर्छ। G जी समावेशीकरणले अन्य सवारी ट्राफिक सहभागीहरूसँग सम्बन्धित प्रत्येक गाडीको सटीक स्थान निर्धारण गर्न धेरै सवारी साधनहरूको बीचको विस्तृत श्रृंखला स्थापित गरेर यस प्रकार्यलाई बृद्धि गर्दछ।
कुनै पनि अन्य वर्ग को तुलनामा, सेल्फ ड्राइभि driving कारहरू द्रुत डाटा स्ट्रिमहरूमा बढी भर पर्दछ। सडक सर्तहरू परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा द्रुत प्रतिक्रिया समयले चालकको वास्तविक-समय निर्णय लिने कामलाई गति दिन सक्छ। पैदल यात्रीहरूको सटीक स्थान पत्ता लगाउने वा अर्को रातो बत्तीको पूर्वानुमान गर्नु केही परिदृश्यहरू हुन् जहाँ टेक्नोलोजीले यसको व्यवहार्यता प्रदर्शन गर्दछ। यस G जी समाधानको गति भनेको एआई मार्फत क्लाउड डाटा प्रोसेसिंगले कारहरूलाई असुरक्षित तर सही निर्णय तुरून्त तुल्याउन सक्षम गर्दछ। स्मार्ट कारबाट डाटा सम्मिलित गरेर, मेशिन लर्निंग (ML) विधिहरूले गाडीको वातावरणलाई परिचालन गर्न सक्दछ; कार रोक्नुहोस्, ढिलो गर्नुहोस्, वा लेनहरू परिवर्तन गर्न यसलाई आदेश दिनुहोस्। थप रूपमा, G जी र एज कम्प्युटि between बीच कडा सहयोगले डेटा सेटहरू छिटो प्रक्रिया गर्न सक्दछ।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, अटोमोटिभ क्षेत्रबाट हुने राजस्व बिस्तारै ऊर्जा र बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्छ।
G जी एक डिजिटल समाधान हो जुन हामीले नेभिगेसनका लागि ताररहित जडानहरू प्रयोग गर्ने तरिका सुधार गरेर अटोमोटिभ संसारमा अनुपम फाइदाहरू ल्याउँछ। यसले सानो क्षेत्रमा धेरै संख्यामा जडानहरू समर्थन गर्दछ र कुनै पनि अघिल्लो टेक्नोलोजी भन्दा छिटो सटीक स्थान प्राप्त गर्दछ। G जी-चालित V2X आर्किटेक्चर अत्यधिक विश्वसनीय छ, कम विलम्बताका साथ, र यसका थुप्रै फाइदाहरू छन्, सजिलो जडान, द्रुत डाटा क्याप्चर र ट्रान्समिशन, उन्नत सडक सुरक्षा, र सुधारिएको सवारी मर्मत जस्ता।
ITProPortal बाट नवीनतम जानकारी प्राप्त गर्न तल साइन अप गर्नुहोस् र विशेष इनबक्समा सिधा पठाइएको विशेष विशेष प्रस्तावहरू!
ITProPortal फ्यूचर पीएलसीको अंश हो, जुन एक अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया समूह हो र अग्रणी डिजिटल प्रकाशक हो। हाम्रो कम्पनी वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस्।
© भविष्य प्रकाशन सीमित क्वे हाउस, एम्ब्री, बाथ BA1 1UA। सबै अधिकार सुरक्षित। इ England्ल्यान्ड र वेल्स कम्पनी दर्ता संख्या २००8885।।